Home Minister and Religious Minister are doing their jobs given by Min Aung Hlaing to sponsor and support the Khwe Thars to bark and bite the Muslims. ” ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်ရင် ရာထူးကထွက်ပေးကြပါ “ | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeHome Minister and Religious Minister are doing their jobs given by Min Aung Hlaing to sponsor and support the Khwe Thars to bark and bite the Muslims. ” ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်ရင် ရာထူးကထွက်ပေးကြပါ “
Home Minister and Religious Minister are doing their jobs given by Min Aung Hlaing to sponsor and support the Khwe Thars to bark and bite the Muslims. ” ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်ရင် ရာထူးကထွက်ပေးကြပါ “
January 15, 2017 drkokogyi
U R wrong. These2ministries are headed by Sit Thars and they are doing their jobs given by Min Aung Hlaing to sponsor and support the Khwe Thars to bark and bite the Muslims.
Nyo Thet Lwin shared Naing Naing Maw‘s post.
” ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်ရင် ရာထူးကထွက်ပေးကြပါ ”
ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားကိုလည်း မျိုးချစ်အဖွဲ့တွေ သွားရောက်တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြည်မြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ တမန်တော်နေ့ပွဲကို မျိုးချစ်အဖွဲ့တွေထပ်မံတားဆီးခဲ့ကြလို့ ပွဲဖျက်ရပြန်ပြီး။
တစ်ခါကနေ နှစ်ခါဖြစ်နေပြီးဆိုတော့ မပြောချင်လဲပြောရတော့မှာပဲ။
ဥပဒေမဲ့ မျိုးချစ်တွေ ကန့်လန့်တိုက်တိုင်းသာ အလျှော့ပေးနေရမယ်ဆိုရင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ဘာလို့အုပ်ချုပ်နေအုံးမှာလဲ။ မျိုးချစ်တွေပဲ အုပ်ချုပ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့။
တမန်တော်နေ့ပွဲကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ ဥပဒေမဲ့ကျင်းပနေတာတွေ ၊ တခြားသော ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ အရေးယူပါ ၊ မပြောလိုပါဘူး။
အခုဟာက ဥပဒေဘောင်ထဲက ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျင်းပနေတာကို မျိုးချစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတောင်းဆိုတိုင်း ပိတ်ပေးရအောင် သူတို့ကဘာကောင်တွေမို့လဲ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ အရင်အစိုးရအဆက်ဆက်တွေမှာတောင် တမန်တော်နေ့ပွဲတွေဟာ ဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိပဲ ကျင်းပခဲ့ကြပြီး အခု ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာမှ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟာ NLD အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကို အများကြီးထိခိုက်စေပါတယ်။
အခုချိန်မှာလည်း ရခိုင်ဒေသပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရသစ်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို ခံနေရတဲ့အချိန်ပါ။ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ပိုလို့တောင်သတိထားရမဲ့အချိန် ဒီလိုပြဿနာတွေဟာ ဝေဖန်မှုတွေပဲ ပိုမိုကြီးထွားလာစေနိုင်ပါတယ်။
မလေးရှားက အခြေအနေတွေအပြင် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ပိုပြီးအာရုံစိုက်ချင်လာအောင် ဖိတ်ခေါ်နေသလိုတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ ဥပဒေမဲ့တောင်းဆိုနေကြတဲ့ မျိုးချစ်အဖွဲ့တွေကို သတိပေးသင့်နေပါပြီး ၊ တားဆီးသင့်နေပါပြီး ၊ အရေးယူသင့်ကြပါပြီး။
ဒီလိုသာ အလျှော့ပေးနေကြဦးမယ်ဆိုရင် အစိုးရသစ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်ပြီး ထိခိုက်နေအုံးမှာပဲ။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးလည်း ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်ရင် ရာထူးကထွက်ပေးကြပါ ၊ ဆင်းပေးကြပါ။
NLD အစိုးရသစ်အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
Saw William Kyaw
← We rely on sources like Nay San [Ro Nay San Lwin] to bring us information from the ground by Al Jazeera မြေပြင်ကသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့အတွက် နေဆန်း [ရိုနေဆန်းလွင်] လို သတင်းရင်းမြစ်မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့မှီခိုနေရတယ်။ အယ်လ်ဂျဇီးရား
Actor Dr. Soe Thu and model Dr. Min Naing Ko Azlan →